अजयको ‘तानाजी’ को ट्रेलर रिलिज दिन देखि विवादै विवादमा ! « Salleri Khabar
अजयको ‘तानाजी’ को ट्रेलर रिलिज दिन देखि विवादै विवादमा !
बलिउड चलचित्र हेर्ने जो-कोहीको लागि सुपरिचित अभिनेता हुन्- अजय देवगन । उनले दर्जनौँ चलचित्र बजारमा l ल्याएइ सकेका छन् भने उनको १००औँ चलचित्र ‘तानाजी’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको दिन देखि विवाद विवादमा मुचिएको छ ।
उनले इतिहासलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भन्दै एनसीपीका नेताले विरोध गरेका छन् । एनसीपीका नेता जितेन्द्र आव हाडले ट्विट गर्दै ‘ओम राउतले आफ्नो चलचित्रमा केही अस्वाभाविक र गलत चीज देखाएका छन् यसलाई चाडो भन्दा चाडो परिवर्तन गर्ने आदेश दिएका छन् ।
अजयले यो फिल्मलाई म आफ्नो तरिका खेल्ने छु तर यस चलचित्रलाई कसैले खतरा मान्नु हुन्छ भने त्यो सही होइन अभिनेता अजयले बताएका छन् । अहिले सम्म विवादमा परेको कुरालाई निर्माण टिमले कुनै जबाफ दिएका छैनन् ।
चलचित्रको मुख्य भूमिकामा ‘जयले सुभे दार’ तानाजी मलुसरेको भूमिका अभिनेता अजयले निभाएका छन् भने उनीसँगै अभिनेत्री काजोल, अभिनेता सैफ अलि खान, शरद केल्कर, पन्कज त्रिपाठी, ल्युक केन्को लागायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
चलचित्रलाई ओम राउतले निर्देशन गरेको चलचित्रलाई अजयले नै निर्माण गरेका छन् । उक्त चलचित्र १० जनवरी, (२०२०) विश्वभरि रिलिज हुँदैछ भने कस्तो कमाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।